Cabbage | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Lee oke ụtọ na ngwa ngwa ịkwọ ụgbọ kabeeji ka oyi bụrụ ihe dị egwu
Onye ọ bụla maara na akwụkwọ nri ahụ bụ ezigbo ahụ ike, ma n'oge oyi, ọ na-esikwu ike ịmegharị menu, n'ihi na ọ bụghị nanị na ọ na-efu ha ọnụ, ma ọ na-adọrọkarị ha uto. Dị ka ihe atụ, akwukwo nri, pickled kabeeji, nke na-esi nri ngwa ngwa karịa sauer, ma nwee ihe ọzọ piquant, ga-enyere aka jide otu oge okpomọkụ n'oge oyi.
Pak-choi: uru na nsogbu nke kabeeji Chinese
Chinese cabbage pak choi bu akwukwo nri nke yiri ahihia n'ile anya, ya na ogwu. Ma echegbula ha. Ngwaahịa a dị ịtụnanya n'ihi na a na-eji ya na nkà mmụta ọgwụ, nri na ọbụna nhazi ihu ala. Ka anyi lee ihe a cho bu. Omenala Akwukwo nso Ogologo oge a ka ewu ewu na China, Korea, na Japan.
Kedu ihe iji mee ihe na otu esi esi kabeeji mee oyi
Nchekwa owuwe ihe ubi maka oyi bụ ụzọ dị mma isi na-echekwa vitamin tupu oge oyi. Na omenala, otu n'ime nhọrọ ndị kachasịsị mkpa bụ ịkọ pịkụl na pịkụl, ọ bụrụ na a mara nke ọma banyere nke mbụ, mgbe ọtụtụ n'ime ndị nwe nke abụọ nwere ike ịkọwapụta: ihe ọ bụla dịka ihe dị mfe na nghọta.
Nri Ezi akwukwo ihe ubi akwukwo nri nke akwukwo nri
Cabbage abụghị nanị ezigbo ụtọ, kamakwa ihe oriri bara uru. Na oge ọkụ, mgbe nwa na-eto eto na-apụta n'elu ụlọ, onye ọ bụla na-agba ọsọ iji mee ka salad dị mma, na-eru nso n'oge oyi, ọtụtụ na-agbalị ịmepụta mkpụrụ osisi pickled n'ụlọ dị iche iche. N'isiokwu a, anyị na-enye ọtụtụ ntụziaka maka kabeeji na mmanya, na-atụle usoro isi nri ọ bụghị naanị na ọ tọrọ ụtọ, kamakwa ngwaahịa bara uru, nke ọtụtụ ndị na-eji na nri maka ọnwụ.
Kedu ka esi ghaapịa kabeeji na Georgian: usoro nhazi nzọụkwụ na foto
Enwere ọtụtụ ntụziaka maka sauerkraut, nke na-ewu ewu na mba dị iche iche nke ụwa, na ihe nzuzo na ụzọ aghụghọ nke nri nke a na-esi na ọgbọ ruo n'ọgbọ. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na otu n'ime ihe ndị na-atọ ụtọ na Georger sauerkraut, bụ nke ndị na-arụ ụlọ ọrụ na-akwadebe dịka ndokwa maka oge oyi ma ọ bụ maka oriri ozugbo.
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Cabbage